Audacity 3.0.0 inouya newedzero yezvirongwa | Linux Vakapindwa muropa
Audacity 3.0.0 inouya nekuwedzera kutsva kwemapurojekiti uye nedzimwe shanduko
Vhiki rapfuura ndakanyora chinyorwa ndichitaura nezve Hydrogen, inova inonakidza dhiramu muchina nekuti inoyambuka-chikuva uye yemahara. Muchinyorwa ichocho ndakataura kuti ndanga ndichiridza mimhanzi zvakare uye, kunyangwe ini ndichisarudza Apple software, kwete wese munhu ane Mac, iPhone kana iPad, uye kunyangwe mashoma anoshandisa Linux, saka unofanirwa kuenda kune izvo zviripo zvakare paWindows. Software inozivikanwa kwazvo iyo inoshandiswa kusanganisa matraki ndiyo protagonist yenyaya ino, uye ndezvekuti masikati ano vatangisa Audacity 3.0.0.
Pachezvangu, zvinoshamisa kuti, mushure me mupepeti v2.4.2ndakaburitsa Audacity 3.0.0 ine shanduko shoma, asi pane imwe chete inonzwisisika nezve iyo renumbering: kubva zvino zvichienda mberi, mapurojekiti anochengetwa ne .aup3 kuwedzerwa, fomati nyowani iyo inochengetedza iyo yese chirongwa mune imwecheteyo faira. Pasina kupokana uye kunyangwe zvingave zvisingaite senge, iko shanduko yakakosha, kubvira kare, kugovana chirongwa chataifanirwa kugovana mafaera mazhinji, izvo zvinogona kuvhiringidza mutengi. Iwo matsva .aup3 mapurojekiti akafanana neGarageBand .band.
1 Audacity 3.0.0 Zvakakosha
2 Kuwedzera .aup3… hmmm…
3 Audacity 3.0.0 ikozvino yavapo
Audacity 3.0.0 Zvakakosha
Sezvatinoona mune kusunungura chinyorwa, Audacity 3.0.0 inouya nezvinhu izvi zvitsva.
Kuwedzera kutsva .aup3. Hakuzovi nemafaira akapatsanurwa zvekare. Shanduko yakakosha, uye ndosaka vakamirira shanduko yekuverengera kuti vakwanise.
Kurumidza kugadzirisa, asi kunonoka kuchengetedza.
Tsigiro ye "yekare" .aup mafaera.
Yakavandudza iyo "Ruzha Kuderedza" mhedzisiro.
Mutsva we "Tag Sounds" analyzer iyo inogona kumaka manzwi uye kunyarara.
Madiki tweaks mukati me software, ayo anosanganisira anodarika zana nemakumi matanhatu akagadziriswa mabugs.
Kuwedzera .aup3… hmmm…
Zvakabata pfungwa yangu yavanayo akawedzera nhamba pakuwedzera, uye ndaida kupindura. Mazuva ano achitamba pakuve muimbi ndanga ndichishandisa TuxGuitar, chinova chinhu kunze kweiyo "Mahara uye Mahara Gitare Pro". Kana tikatsvaga mambure, tichaona kuti pane angangoita .gp3, .gp4 uye .gp5 mafaira, uye izvozvi mafaera achinja kushandisa iyo .gpx yekuwedzera. Arobas Music, uyo anovandudza software, anofanira kunge akafunga, nei uchiwedzera nhamba pakuwedzera uye uchichinja neimwe neimwe vhezheni vhezheni? Uye akashandisa X panzvimbo yenhamba. Uye ikozvino tinoona imwe nyaya mune iyo nyowani Audacity 3.0.0 yekuwedzera.
Zviri pachena kuti tichave tichishandisa iyo Audacity v3.x kwemakore, asi ini ndine kusahadzika kumwe: kuchave nekuwedzera kweaup4 mune ramangwana, ivo vachadzokera ku .aup kuwedzera kana ivo vachawedzera X seGuitar Pro?
Audacity 3.0.0 ikozvino yavapo
Audacity 3.0.0 ikozvino iripo kune ese masisitimu akatsigirwa kubvira yekuvandudza webhusaiti. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kurodha pasi kodhi kodhi. Gare gare inozoonekwa mumahofisi epamutemo ekuparadzirwa kweLinux, AUR pane Arch Linux-based system, mu Snapcraft y Flathub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Audacity 3.0.0 inouya nekuwedzera kutsva kwemapurojekiti uye nedzimwe shanduko
Antonioni Rocha akadaro
Mune shanduro 2.x, bhokisi rekutarisa rewindo rekutambira muLinux mune yakasviba theme (senge Breeze rima) ine yakajeka uye isingaverengeke zvinyorwa. Unogona here kuziva kana vakagadzirisa iyi bhagi?
Pindura kuna Antonioni Rocha
Mune iyo Flatpak vhezheni paKubuntu inotaridzika kunge yakanaka. MuManjaro inotaridzika zvakanaka, asi mune iyo vhezheni yandinoshandisa, mazhinji maapplication haangoerekana achinjira kurima.
Tilda: inogadziriswa inodonhedza-pasi terminal